OMC pressurized mmanụ ụgbọala Fuel tankị | Outboard Boat Motor Mmezi
OMC pressurized mmanụ ụgbọala Fuel tankị
Pịa ebe a ịzụta eBay maka Evinrude/ Ụlọ Osimiri na tankị Johnson
A Warning About pressurized mmanụ ụgbọala Fuel tankị Jiri On Older OMC Motors
Ndị a na-eji tankị mmanụ ọkụ, ndị a maara dị ka tankị Cruis-a-Day. Kama ịṅụ mmanụ ọkụ site na tank, bọmbụ abụọ ntanetụ ọkụ na-agba n'ime tank, na-agbanye ya na 4-7 PSI nke na-eme ka mmanụ azụ laghachi na moto ahụ. N'ụzọ bụ isi, tankị ndị a na-agbanye ọkụ ọkụ bụ ọkụ dị oke egwu ma ọ bụ ihe mgbawa. OMC kwụsịrị iji tankị ndị a mgbe 1959 kwụsịrị.
Ị nwere ike ịkọ ma ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime tankị ndị a n'ihi na nchara ga-enwe ahịrị abụọ, otu iji kpoo ikuku n'ime tank mmanụ, onye nke ọzọ ga-enyefe ụgbọala ahụ. Ụdị tank a bụ nke mbụ mmanụ ụgbọ ala nke OMC pụta na ọ bụ nkà na ụzụ ọhụrụ n'oge ya. Ozugbo a chọpụtara nsogbu ndị a, ndị na-ere ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri gbanwere n'otu usoro mmanụ ụgbọala nke na-adịghị mma.
Pressure tank njikọ
Old Style Pressure Mmanụ tank
5 lita Pressure Mmanụ tank
Nsogbu na pressurized Fuel tankị:
Mmanụ ụgbọala na Gas Alụlụụ nrụgide bụ ihe ọ bụla na-erughị a bọmbụ!
O siri ike ka ndị tankị ahụ kwụchaa nke ọma, ọbụlagodi mgbe ọ dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na tankị na-agbapụta, gas na mmanụ ga-agbapụ n'ime ụgbọ mmiri gị na n'ime ikuku.
Leaky tankị nwekwara ida mkpa mgbali napụta mmanụ ụgbọala elu ogologo sooks azụ ka moto.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbọrọgwụ mmanya, ndị a nwere ike ịgbaghasị (ọkụ n'ime oghere) na nrụgide nrụgide n'okpuru mmanụ ọkụ na n'ime tank. A mara nke a iji mee ka okpueze ahụ kpochapụ ekele ma gbaa elu 20 ụkwụ n'ime ikuku! Ntughari a nwere ike igbanye mmanụ ụgbọ ala gị. A makwaara nke a iji mee ka ndị ọrụ mmanụ ụgbọala gbatuo.
Ọ bụrụ na ị na-esi na mmiri na gị tank ada ada jide mgbali, nanị ụzọ na-agba ọsọ gị moto bụ jide tank elu n'elu larịị nke carburetor ka mmanụ ụgbọala ndọda oriri na moto.
Ndị tankị a adịghị mfe ịrụ ọrụ. Ịkwesiri iji tankị na-agbanye mmiri tupu i nwee ike ịmalite moto gị. Ị ga-emerụkwa tank ahụ tupu i wepụ ya.
Ọ bụrụ na ịnwere otu n'ime tankị ndị a na-emepụta ihe, ọ ga-adị mkpa ka ị nweta nlekọta iji rụọ ọrụ nke ọma. E nwere kits ndị dị iji rụzie gaskets na akàrà na tankị ndị a ka nwere ike ịzụta taa. Ịkwesịrị ime mkpebi ma ọ bụrụ na ị rụkwaa tankị gị ma ọ bụ gbanwee ụdị pump mmanụ na akara nke OMC na-eji taa.
Na-esonụ usoro-agwa otú i nwere ike gị moto ka a ọzọ ot mmanụ ụgbọala mgbapụta, akara, na tank nke ga-adịchaghị ize ndụ na ndị ọzọ pụrụ ịdabere na.
N'ịtụgharị si abụọ Line Pressure tank System ka Single Line Fuel mgbapụta mmiri tank System
Usoro maka ime mgbanwe a dị nnọọ mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwerelarịrị na-ewepu carburetor gị. Ihe ndị ị ga - achọ gụnyere ihe ndị a:
About 6 ụkwụ agụụ akara sooks, dị mgbe ọ bụla akpaaka akụkụ ụlọ ahịa.
Mikumi Single Carburetor mgbapụta
Agụụ Line Cap
3 ma ọ bụ 4 Zip Ties
Single Line Fuel njikọ
Single Line Gas tank na sooks
Mikumi bụ ụlọ ọrụ Japan nke nọworo na-eme ka ndị na-arụ ọrụ ụgbọ ala na mmanụ bọmbụ na-eme ọtụtụ afọ. Ị ga-ahụ ọtụtụ nfuli mmanụ ha na-eji na-aga ụgbọ ala, ụgbọ elu ọkụ, na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ metụtara obere ụgbọ ala. A pụrụ ịchọta mgbapụta mmanụ ọkụ a dịka ọ bụla ahịa ahịa ọ bụla. Azụtara m otu a na ntanetị maka $ 22.00. Ọtụtụ nfuli ọkụ mmanụ maka obere Evinrude na Johnson motors na-arịgo na steepụ. N'ihe banyere moto 5.5 HP, ọ nweghị ebe ị ga-esi na-ebuli mgbapụta mmanụ. Igwe ndị ka njọ dịka 7.5, 10, ma ọ bụ 18 HP con nwere ngwaahịa OMC mmanụ ụgbọala kwukwara.
Mikumi usu ọrụ Fuel mgbapụta
Mmiri mmanụ ọkụ a na-arụ ọrụ site na mwepụ agụụ na ọ na-esi na moto. Mmiri ahụ na-eme ka agụụ a na-emegharị ma nyefee ya na mgbapụta site na eriri nke na-ejikọta njikọ n'etiti na mgbapụta ahụ. Ndị ọzọ ejikọta abụọ bụ maka eriri na-aga gas tank ma ọ bụ njikọ mmanụ ọkụ (akụ na-atụ aka na) ma na-aga carburetor (akụ na-egosi).
Wepụ Carburetor PỊA EBE A. ịhụ ntụziaka na-wepụ carburetor.
Ọ bụrụ na ị wepụ ihe mkpuchi ihe oriri ahụ, nke dị n'azụ carburetor, ị ga-ahụ oghere abụọ nwere oghere roba n'elu ha. Ihe nkedo ndị ahụ bụ valvụ valị nke ikuku na-aga site na crankcase. Nke a na - eme ka ikuku ikuku dị mma na - agafe otu n'ime akara mmanụ ọkụ abụọ iji mee ka tankị daa. Wepu scre abụọ na-ejide mmiri ma chọpụta valvụ. Otu n'ime oghere ndị a na-aga ebe ọ bụla na-arụ ọrụ n'ụgbọala anyị.
Iji nweta ihe mgbochi mkpokọta, pịnye otu n'ime oghere ndị nwere nkwụnye ntinye ọkụ. Gbano ogologo nke ntanetị ọkụ na ntanetị ka Ibe mkpuchi nke ihe oriri ga-ejide nkwụnye ahụ ka ọ ghara ịdapụ n'ọnọdụ. Dochie mkpuchi ọtụtụ ihe oriri.
Dochie njikọ ochie mmanụ abụọ na njikọ mmanụ ụgbọ ala ọhụrụ. Enwere m ike ijikọta mmanụ ụgbọ ala na salve ụgbọ mmiri m maka gburugburu $ 6.00 mana ha na-esitekwa n'aka ndị na-ere ahịa OMC. N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịhụ ndị agadi na ndị mmanụ ọhụrụ. Njikọ ọhụrụ ahụ (n'aka ekpe) nwere naanị ụzọ abụọ. Tinye 2 ụkwụ nke eriri agụụ na njikọ na ihe oriri dị iche iche.
Wepu usoro ochie abụọ ahụ na-aga site na ogwe aka ogwe aka nke na-ejikọta mmanụ ọkụ ma dochie ya na otu akara nke ga-esi na mmanụ ọkụ na-ebute mmanụ ọkụ mmanụ ọhụrụ. Kwe ka 2 ụkwụ nke akara na-agagharị na mgbapụta mmanụ.
Dochie Carburetor PỊA EBE A. iji hụ ntụziaka na ịwụnye carburetor. Tinye 2 ụkwụ nke akara mbadamba na carburetor ka a ga-agagharị na mgbapụta mmanụ.
Gaa na ntinye mkpụrụ ndụ gị, eriri carburetor, na eriri mmanụ na-agbanye na mgbapụta mmanụ ọkụ nke m na-etinye n'azụ ụzụ ntanye na-esote ọdụdụ. Kpochapụ ụdị ihe ọ bụla na-agafe karịa ma jikọta mgbapụta mmanụ. Mgbe ị na-agagharị ebe a, debe ha site na akụkụ ọ bụla na-akpụ akpụ, ma ọ bụ njikọ. Igwu ahụ kwesịrị ịkwado ihe mgbapụta mmanụ ọhụrụ gị. Jiri nkedo zoro ezo iji dozie esemokwu ka ha wee nọrọ ebe.
Your moto ugbu a tọghatara na ị dị njikere iji ọhụrụ gị gas tank na mmanụ ụgbọala akara.